Harry Maguire oo fariin u diray taageerayaasha kooxda Man United kahor kulanka Arsenal – Gool FM
(Manchester) 30 Okt 2020. Kabtanka kooxda Manchester United ee Harry Maguire ayaa rumeysan in Red Devils ay ku socoto jihada saxda ah, laakiin ay muhiim tahay inay sii wado dhismaha kaddib guushii muhiimka ahayd ee 5-0 ay ka gaareen Leipzig.
Maguire ayaa si rajo leh u hadlay kaddib qaab ciyaareedkiisii ​​fiicnaa ee kulankii Champions League, waxayna haatan u muuqataa Red Devils inay soo fiicnaaneyso kaddib guuldarradii 6-1 aheyd ee ka soo gaartay kooxda Tottenham Hotspur.
Guuldarradaas kaddib Manchester United waxay gaartay 3 guul ah, waxayna gashay 1 barbaro ah, iyadoo dhalisay 11 gool, waxayna ilaashatay shabaqeeda.
Kabtanka kooxda Manchester United ee Harry Maguire ayaa yiri:
“Kaddib Tottenham Hotspur, dhamaanteen waxaan dareemeynay jahwareer, kaddib saddex kulan kaliya bilawgii xilli ciyaareedka, waxayna ahayd dareen la yaab leh”.
“Ma rajaynayno inaan guuldareysano kulamada aan ku ciyaareyno garoonkeenna Old Trafford, runtiina ma rajeynayno inaan guuldaro la kulanno sidii ay sameeyeen Tottenham”.
”Kaddib markii aan ka soo laabanay fasaxii xulalka, waxa aan ka shaqaynay inaan noqono daafac adag, waxa inagu soo food leh safar dheer waana in aan horumar gaarno”.
“Waxaa dooneynaa inaan u gudubno wareega bug-baxa oo aan sare ugu qaadno natiijooyinkeena marka loo eego xilli ciyaareedkii hore”.
Si kastaba ha noqotee, Manchester United ayaa Axada ku soo dhaweyn doonto kooxda Arsenal garoonkeeda Old Trafford, si ay u wada ciyaaraan kulan qeyb ka ah horyaalka Premier League, Red Devils ayaana dooneysa inay gacanta ku dhigto saddexda dhibcood, si ay ugu soo dhawaato boosaska hore.